UYIFUMANA PHI KWAYE PHI INDAWO YOKUTHENGA I-HYDRO PROTOCOL (HOT) -ISINYATHELO ESILULA NGESIKHOKELO SENYATHELO - UKUTHENGA I-CRYPTO
Uyifumana phi kwaye phi indawo yokuthenga i-Hydro Protocol (HOT) -Isinyathelo esilula ngeSikhokelo seNyathelo
Inyathelo 5: Trade HOT
Inyathelo lokugqibela: Gcina iHOT ngokukhuselekileyo kwizipaji zehardware
Ezinye izixhobo eziluncedo kurhwebo lweHOT
Iprotocol yeHydro (HOT) yi-cryptocurrency kwaye isebenza kwiqonga le-Ethereum. Iprotocol yeHydro inonikezelo lwangoku lwe-1,560,000,000 nge-702,000,000 ejikelezayo. Ixabiso lokugqibela le-Hydro Protocol yi-0.01680474 USD kwaye inyuke ngama-56.05 ngaphezulu kweeyure ezingama-24 ezidlulileyo. Okwangoku ithengisa kwimarike (ii) esebenzayo ezi-6 ngeedola eziyi-14,953,790.81 ezithengisiweyo kwiiyure ezingama-24 ezidlulileyo. Olunye ulwazi lunokufumaneka ku https://hydroprotocol.io/.
Ixabiso langoku le-HOT yi- $ 0.02 kwaye ibekwe kwi-819 kwi-Coinmarketcap kwaye kutsha nje i-57.56 yepesenti ngexesha lokubhalwa.
I-HOT idweliswe kwinani lotshintshiselwano nge-crypto, ngokungafaniyo nezinye iimali eziphambili, ayinakuthenga ngokuthe ngqo ngemali ye-fiats. Ungathenga ngokulula le ngqekembe ngokuqala uthenge i-Bitcoin kuyo nayiphi na indawo yokutshintshiselana nge-fiat-to-crypto emva koko udlulisele kutshintshiselwano olunikezela ukuthengisa le ngqekembe, kweli nqaku lesikhokelo siza kukuhamba ngokweenkcukacha amanyathelo okuthenga i-HOT .
Kodwa asikenzi okwangoku, kuba i-HOT yi-altcoin kufuneka sidlulisele i-BTC yethu kutshintshiselwano ukuba i-HOT ingathengiswa, apha siza kusebenzisa i-Huobi njengotshintshiselwano lwethu. IHuobi lutshintsho oluthandwayo lokurhweba ii-altcoins kwaye inenani elikhulu lee-altcoyins ezithengiswayo. Sebenzisa ikhonkco elingezantsi ukubhalisa iakhawunti yakho entsha.
Kuya kufuneka ufumane isaziso sokuqinisekisa esivela eHuobi nje ukuba i-BTC yakho ifikile. Kwaye ngoku sele ukulungele ukuthenga i-HOT!
Unikezelo lwevisa visa amazon
Kwikholamu elungileyo kukho ibha yokukhangela, ngoku qiniseka ukuba 'i-BTC' ikhethiwe njengoko sithengisa i-BTC kwi-altcoin pair. Cofa kuyo kwaye uchwetheze 'HOT', kuya kufuneka ubone i-HOT / BTC, ukhethe eso sibini kwaye kuya kufuneka ubone itshathi yexabiso le-HOT / BTC embindini wephepha.
Apha ngezantsi kukho ibhokisi eneqhosha eliluhlaza elithi 'Thenga i-HOT', ngaphakathi kwebhokisi, khetha ithebhu 'yeNtengiso' apha njengoko lolona hlobo luhamba phambili lokuthenga iiodolo. Unokuchwetheza kwisixa sakho okanye ukhethe ukuba yeyiphi na indawo oyithandayo ongayisebenzisa ekuthengeni, ngokunqakraza kumaqhosha eepesenti. Xa uqinisekisile yonke into, cofa 'Thenga HOT'. Voila! Ekugqibeleni uthenge i-HOT!
Ngaphandle kokutshintshiselana (ngentla) ngasentla, kukho iitshintshiselwano ezimbalwa ezithandwayo ze-crypto apho zinemilinganiselo efanelekileyo yokuthengisa yemihla ngemihla kunye nesiseko esikhulu somsebenzisi. Oku kuyakuqinisekisa ukuba uza kukwazi ukuthengisa iingqekembe zakho nangaliphi na ixesha kwaye iifizi zihlala ziba sezantsi. Kuyacetyiswa ukuba ubhalise kolu tshintshiselwano ukusukela ukuba i-HOT idwelisiwe apho iya kutsala isixa esikhulu semali yokuthengisa evela kubasebenzisi phaya, oko kuthetha ukuba uya kuba namathuba amahle okurhweba!
Ukuba ucwangcisa ukugcina ('hodl' njengoko abanye besitsho, ngokusisiseko i-misspelt 'hold' ethe yaziwa ngokuhamba kwexesha) i-HOT yakho ixesha elide, unokufuna ukuphonononga iindlela zokugcina zikhuselekile, nangona iBinance yenye otshintshiselwano olukhuselekileyo lwe-imali yedatha apho kuye kwakho izehlo zokugenca kwaye iimali zalahleka. Ngenxa yobume beewallets ngokutshintshiselana, ziya kuhlala zikwi-Intanethi ('Iisipaji ezishushu' njengoko sizibiza njalo), ke ngoko ziveza imiba ethile yokuba sesichengeni. Eyona ndlela ikhuselekileyo yokugcina iingqekembe zakho ukuza kuthi ga ngoku ihlala ibeka kuhlobo 'lweeCold Wallets', apho isipaji sinokufikelela kuphela kwi-blockchain (okanye 'yiya kwi-Intanethi') xa uthumela imali, ukunciphisa amathuba izehlo zokubulala. Isipaji sephepha luhlobo lwesipaji esibandayo sasimahla, sisibini esenziwe ngaphandle kwedilesi esidlangalaleni nakwabucala kwaye uya kuyibhala kwenye indawo, kwaye ugcine ukhuselekile. Nangona kunjalo, ayomelele kwaye ichaphazeleka kwiingozi ezahlukeneyo.
Ndingayithenga iHOT ngekheshi?
Ngaba zikhona iindlela ezikhawulezayo zokuthenga i-HOT eYurophu?
Ngaba kukho amanye amaqonga okuthenga iHOT okanye iBitcoin ngamakhadi etyala?
Akukho ndlela ethe ngqo yokuthenga i-HOT ngemali. Nangona kunjalo, ungasebenzisa iindawo zentengiso ezinje Iinkonzo zeNgingqi ukuthenga i-BTC kuqala, kwaye ugqibe onke amanye amanyathelo ngokudlulisela i-BTC yakho kutshintsho lweAltCoin.
uyiseta njani i-netgear ac1200 wifi range extender
Funda ngakumbi kwiziseko zeProtocol yeHydro kunye nexabiso langoku apha.
uyifumana njani kwakhona iakhawunti ye-minecraft elahlekileyo
Umphuhlisi weewijethi ezili-14
Iintshukumo ze-github zisabela kwindalo
faka i-netgear wifi ye-extender extender
ndingazithenga phi iingqekembe ze-zap
uyilo olucocekileyo ujason taylor
Ipateni yebhulorho c ++